Min Aung – Learn Teach Center
For Genuine Learners and Teachers
Browse Author Min Aung
ကျွန်တော်၊ ကျွန်ူပ် နှင့် “ငါ”
ဗမာတို့ရဲ့ ကျွန်ဘဝ ဘယ်တုံးကစ မြန်မာစကားတွင် မိမိကိုယ်ကို မိမိညွှန်းသော စကားလုံး အဓိက ၃ လုံးမှာ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ၊ ကျွန်ူပ်(ကျုပ်) နှင့် “ငါ” တို့ဖြစ်သည်။ မူလစကားလုံးအစစ်မှာ “ငါ” ဖြစ်သည်။ သားသမီးက မိခင် ဖခင်နှင့်လည်း “ငါ” နှင့်ပြောပါသည်။ ကျွန်တော် (ကျွန်မ)၊ ကျွန်ူပ်(ကျုပ်) တို့မှာ မင်းစိုးရာဇာတို့နှင့် ဆက်ဆံရာတွင် မင်းစိုးရာဇာတို့ကိုအထက် မိမိကိုယ်မိမိကိုအောက် နှိမ့်ချပြီးပြောဆိုရာမှ ကြွင်းကျန်နေခဲ့သော စကားလုံးများ ဖြစ်ကြသည်။ ပယ်ဖျောက်ရမည့် စကားလုံးများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်တော် = တော်ဝင်ကျွန် (ဘုရင်နှင့် ဘုရင့်အမျိုးတို့၏ အမှုထမ်းမိသားစုများ) ကျွန်ုပ် = သေးနုပ်သောကျွန် (သာမန်အရပ်သားများ) အထက်ပါ “ကျွန်တော်” ၏အဓိပ္ပ္ပါယ် အရ မန္တလေးသူများ အဘယ်ကြောင့် ကျွန်မဟု […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ ဘယ်လိုလူလဲ၊ ဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲ။ 95. မှတ်မိသမျှ ကိုအောင်ဆန်း၏ကျောင်းသားဘ၀(သခင်ကျော်စိန်)
အုန်းဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ သံလွင်ဆီ တစ်မျိုးမျိုးနှင့် မိနစ် ၂၀ ခန့်ပလုတ်ကျင်းပါ။ ခံတွင်းနှင့် သွေးအတွင်းမှ ပိုးမွှားနှင့်အညစ်အကြေး အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည်၊ အုန်းဆီ အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်၊ အုန်းဆီအစစ် (virgin coconut oil) ကိုသုံးကြသည်၊ ဆီလုတ်ကျင်းရန် အကောင်းဆုံးအချိန်မှာ နံနက်အိပ်ယာထပြီး အစာမစားမီအချိန်ဖြစ်သည် – ဟုဆိုပါသည်။ ၁၄ ရက်ဆက် တိုက် တစ်နေ့တစ် ကြိမ် ဆီလုတ်ကျင်းပြီး နောင်တွင် တစ်ပါတ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ကျင်းပါ၊ တစ်နေ့တစ်ကြိမ် ကျင်းနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါသည်၊ ခံတွင်းရောဂါများရှိပါက အစာစားချိန်နီးတိုင်း ဆီလုတ်ကျင်းပါ ဟုလည်း အကြံပြု ကြသည်။ ဆီလုတ်ကျင်းပြီးလျှင် ထွေးပစ်ပါ။ ထိုနောက် ရေနွေးဖြင့်ဖြစ်စေ ရေအေးနှင့်ဖြစ်စေ ပလုတ်ကျင်းသွားတိုက်ပါ။ ဆီလုတ်ကျင်း ပြီး နောက် ဆီထဲတွင်ပါသွားသော ဘက်တီးရီးယားများ ကိုယ်ထဲသို့မဝင်စေရန်အတွက် မျိုမချပဲ ထွေးပစ် သင့်သည်၊ ရေနွေးဖြင့်ပလုတ်ကျင်းပြီး သွားပါတိုက်ပစ်သင့်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ ဆီလုတ်ကျင်းချိန်ကြာလွန်းလျှင်လည်း ဆီနှင့်တံတွေးထဲမှ ပိုးမွှား အဆိပ်အတောက်များကို ခန္ဓာကိုယ်သွေးကြောများကပြန်လည် စုပ်ယူသွား နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ […]
မိမိကိုကျေးဇူးပြုနေသူများသည် မိမိနှင့်ပတ်သက် ဆက်ဆံနေရသူများသာ ဖြစ်နေမြဲ ဓမ္မတာပင်တည်း။ လူအချင်းချင်း ဆက်ဆံပြီဆိုလျှင်လည်း လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန စသော ကိလေသာ များ ရှိကြသည့် အလျှောက် အပြန်အလှန် အထိအခိုက် အမှားအယွင်း ရှိမြဲဖြစ်၏။ မိမိအပေါ်တွင်ရှိသော ကျေးဇူးတို့ကိုကား ဉာဏ်ဖြင့် ဆင်ခြင်မှသာ၊ ဉာဏ်လည်း မှီမှသာ သိနိုင်၏။ သတိဖြင့်အောက်မေ့မှသာ အမှတ်ရနိုင်၏။ မိမိဖြစ်ခဲ့သော ဒေါသသည်ကား အလိုလိုပြန်၍ပြန်၍ပေါ်လာ၏။….ဆက်ဖတ်ရန်…
On day last month, I receivedastory aboutacouple of birds fromafriend by email. I added some comments and post it here for the people who are interested much presently in life, love, peace, and spiritual development. A study onacouple of birds
If you want to discuss about Stat2or Intro Stat, go to discussion boards. Post your questions there. The teacher will answer at the earliest possible occasion.
LearnTeachFan at Facebook
Direct access from facebook to LTC and from LTC to facebook.
Make-up Problem 1 question numbers 1 –9at Stat 2: Instructions, and do Exercises 1 –4at Stat 2: Exercises
Learners will have teachers and teachers will have learners.